ငါ့အချစ်တော်တိရစ္ဆာန်များချိန်းတွေ့ »5စျေးသိပ်မကြီးတဲ့ဆောင်းရာသီနေ့စွဲအကြံဉာဏ်များ
အားလပ်ရက်ရူ့များအတွက်ရာသီ TiS, ချစ်ရသူနှင့်အတူဆောင်းတွင်းပျော်ရွှင်စရာနှင့်အသုံးစရိတ်အချိန်. သင်သည်ငါနှင့်တူသောကျောင်းသားတစ်ဦးဆိုရင်, အဘယ်သူသည်ပင်အိမ်သာစက္ကူဝယ်ယူတတ်နိုင်ရန်ရုန်းကန်နေရသည်, သို့ဖြစ်. သင်တို့သည်နှစ်ခုလုံးပျော်စရာဖြစ်ကြောင်းဆောင်းတွင်းရက်စွဲများရှာဖွေနေပါတယ်နှင့်သင့်ပိုက်ဆံအိတ်ကိုမချိုးပါလိမ့်မယ်. သင်သည်ကံရောက်နေ. ဤငါးခုရက်စွဲစိတ်ကူးများစျေးသိပ်မကြီးတဲ့ဖြစ်ကြပြီးသင်၏ဆက်ဆံရေးကိုဒီအားလပ်ရက်နွေးကြမည်.
1. အတူတူနေတဲ့ Gingerbread အိမ်တော်ကိုလုပ်ပါ
သင့်ရဲ့ချိုမြိန်သွားအတွက်လုပ်ကြ, နှင့်မီးပွားတစ်ဦး Gingerbread အိမ်၏ဆောက်လုပ်ရေးနှင့်အတူဝယ်ပျံစေ. အင်ဂျင်နီယာနည်းပညာခွက်ကိုသင့်မရှိခြင်းနှင့် ပတ်သက်. စိုးရိမ်နေ? နောက်တဖန်မစိတ်မပူ, သင်လိုအပ်သမျှပစ္စည်းကိုထည့်သွင်းသောဤကြီးစွာသော Gingerbread ပစ္စည်းများရှိပါတယ်, တစ်ခုနှင့်လွယ်ကူသော-To-read ညွှန်ကြားချက်စာရွက် (သူတို့ထဲကအများစုဟာပင်ပုံများပါဝင်သည်). ထက်လျော့နည်းကုန်ကျ $20, ထိုပစ္စည်းများအများဆုံးစူပါမားကတ်မှာရရှိနိုင်ပါတယ်, ယာဉ်စတိုးဆိုင်များ, ပင်အွန်လိုင်း. အချို့သောအားလပ်ရက်တီးလုံးပေါ်တွင်တင်တည်ဆောက်ခြင်းရ! ဒီစားသုံးဆီဖန်ဆင်းခြင်းကိုတပ်ဆင်၏ဒုတိယအလွအစိတ်အပိုင်း smashing နှင့်အတူလောင်သည်. ကျိန်းသေကြီးမြတ်အစားအစာ၏ဂတိကြီးစွာသောအချိန်.
2. ချောကလက်အပူ, cuddles နှင့်အားလပ်ရက်ရုပ်ရှင်
အဘယ်အရာကိုမျှပူပြင်းတဲ့သောက်စရာနဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာရဲ့မီးတောက်ကိလေသာကဲ့သို့အအေး beats. ပွင်ဖြစ်ကောင်းလည်းပြင်းထန်. အဘယ်သို့ငါဆိုလိုသင့်အထူးတစ်စုံတစ်ဦးနှင့်အတူ cuddling နှင့်ပူပြင်းချောကလက်တစ်ခွက်ခံစားချမ်းအေးလှတဲ့ဆောင်းတွင်းရာသီဥတုကိုမှသင့် Insider နွေးနိုင်ခြင်းဖြစ်သည်. ထိုကဲ့သို့သောတစ်ခုကဲ့သို့ဂန္တဝင်အားလပ်ရက်ရုပ်ရှင်ထဲတွင် Add Eleven သို့, ဒါဟာအံ့သြစရာကောင်းတဲ့ဘဝ, တစ်ယောက်တည်းမူလစာမျက်နှာ, ကိုဘယ်လို Grinch ခရစ္စမတ်ခိုးယူ သို့မဟုတ် တစ်ဦးကခရစ္စမတ် ​​Story ထိုသို့အဆုံးစွန်သောရက်စွဲကိုတညဉ့်မယ့်. အနည်းငယ်သာကုန်ကျ, သင်ချစ်ရသူနှင့်အတူအရည်အသွေးမြင့်မားအချိန်နှင့်ရင်းနှီးတွင်ချမ်းသာကြွယ်ဝဖြစ်လာနေချိန်မှာပိုက်ဆံကယ်တင်နိုင်သည်.
Festival အလှဆင်ဆောင်းတွင်းအရမ်းလှတယ်ကိုအဘယ်သို့သောအရာ၏အစိတ်အပိုင်းများမှာ. သင်ဘယ်မှာနေထိုင်နေပါစေ, အိမ်သူအိမ်သားပြီးနောက်နန်းတော်ကိုဖြစ်ဖွယ်ရှိရှိပါတယ်, အလင်းအိမ်နှင့်အတူစီတန်းလမ်းပေါ်ကပြီးနောက်လမ်းပေါ်, အဆင်တန်ဆာ, ပန်းကုံးများနှင့်ခပ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုအမှီ ပြု. ရွှင်လန်း. လမ်းလျှောက်မြို့လယ်များအတွက်သို့မဟုတ်သင့်ရပ်ကွက်အတွင်းအတွက်သွားနဲ့ချစ်စရာကောင်းတဲ့အားလပ်ရက်အလင်းအိမ်နှင့်အလှဆင်ကြည့်ပျော်မွေ့ပြီးတော့ညဦးတိုင်အောင်စောင့်ဆိုင်းနှင့် (သင်ရှာတွေ့နိုင်ပါသည်မည်သို့ကြီးမားတဲ့ငွေအစီအမံအများအပြားကြည့်ရှု). အကောင်းဆုံးကိုအားလပ်ရက် setup ကိုရှိတယ်သောအိမ်သည်သင်ပင်ပေါ်မဲပေးခြင်းဖြင့်ဂိမ်းသို့ဖြစ်စေနိုင်. အဘယ်အရာကိုမျှကုန်ကျနိုင်, ဒီရိုးရှင်းတဲ့ရက်စွဲကိုအလွယ်တကူတို့၏ဆက်ဆံရေးကိုတက်ပွင့်လင်းနိုင်.
4. ဆီးနှင်း Adventures
မိုဃ်းပွင့်စောင်၏အားသာချက်ကို ယူ. အပြင်မှာအကြီးအတွင်အချို့သော Adventures အတွက်သင့်ချစ်ရသူနှင့်အတူထဲကတက်အစုဝေး. လက်ဝါးကပ်တိုင်တိုင်းပြည်နှင်းလျှောစီး Go, သင့်ဒေသခံပန်းခြံသို့မဟုတ်လမ်းကြောင်းအတွက်တောင်တက်သို့မဟုတ်ဆီးနှင်းရှူးဖိနပ်. သည်တောင်ကိုဆင်းပျံနှင့် tobogganing ၏တစ်ရက်နှင့်အတူသင့်ရဲ့ငယ်စဉ်ကလေးဘဝ reliving ခံစားပျော်မွေ့. အတူတူတစ် snowman တစ်ခုသို့မဟုတ်ခံတပ်ကိုတည်ဆောက်သို့မဟုတ်လဟာပြင်ရေခဲအမြန်စကိတ်စီးစကိတ်သွား. အနည်းငယ်သာကုန်ကျ, သဘာဝဆက်ဆံရေးကိုရာ၌ကောင်းစားဘို့အကောင်းဆုံးကစားကွင်းတဦးဖြစ်ကြောင်းသက်သေပြနိုင်ပါ.
5. DIY လက်မှုပညာ
အင်တာနက်ကိုမရေမတွက်နိုင်သောအခမဲ့ DIY အားလပ်ရက်ယာဉ်အကြံဥာဏ်များနှင့်ညွှန်ကြားချက်များရရှိထားသူ. စုံတွဲတစ်တွဲစိတ်ဝင်စားသူများကိုရွေးချယ်ပါနှင့်သင်အိမ်တော်ပတ်လည်မုသာပြီယာဉ်စတိုးဆိုင်သို့မဟုတ်သုံးပစ္စည်းများသာကူးခေါင်းနှင့်မကောင်းသောအကြံကိုကြံရ! သင်သည်နောက်ကျောအများပြည်သူကျောင်းမှာအနုပညာနှင့်လက်မှုပညာ၏ပရိတ်သတ်ဘယ်တော့မှခဲ့ကြမယ်ဆိုရင်, အသစ်တစ်ခုခုကိုစမ်းကြည့်ဖို့အမြဲကောင်းမယ့်ကိုသတိရ, နှင့်သင်တို့၏သက်သာဇုန်ထဲကထွက်ခြေလှမ်း. သင်ထွက်ကူညီရာဇဝတ်မှုအတွက်သင့်ရဲ့မိတ်ဖက်ရှိသည်လိမ့်မယ်မှတပါးအခြားသောဘုရား.
ဤငါးခုရက်စွဲစိတ်ကူးများစျေးသိပ်မကြီးတဲ့များမှာ, ပညာသားပါနှင့်ဤဆောင်းတွင်းရာသီအတွင်းတွင်သင်နှင့်သင်ချစ်တဦးတည်းအဘို့အကောင်းတစ်ဦးအချိန်ကိုအာမခံပါလိမ့်မယ်. ထိုအားလပ်ရက်ခံစားပျော်မွေ့ခြင်းနှင့်သင်တို့၏ဆက်ဆံရေးပျော်မွေ့.